Sawirro : Xaaladda noolaleed ee dadkii ay ku habsatay masiibadii Sierra Leone - BBC News Somali
Sawirro : Xaaladda noolaleed ee dadkii ay ku habsatay masiibadii Sierra Leone
Muddo hadda bil laga joogo ayaa qaybo ka mid ah magaalada Freetown ee dalka Sierra Leone waxaa burburiyay dhiiqo ku soo rogantay. Qiyaastii 800 oo qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen masiibadaasi halka ugu yaraan 7,000 oo qof oo kale ay ku barakeceen. Kaddib usbuucyo uu roob xooggan ka da'ayay ayaa waxaa soo dumay qaybta sare ee buurta Sugar Loaf, waxayna dhiigo ay ku soo rogan tahay bulshadii halkaa deganayd. Biyo iyo dhiiqa isla socda ayaa cagta mariyay guryo ku yaallay labo deegaan oo lagu kala magacaabo Kamayama iyo Kaningo.
Xigashada Sawirka, Olivia Acland
Wixii intaa ka dambeeyay qoysaskii soo barakacay waxay ku hoyanayeen guryo ku meel gaar ah halka qaar kalena ay eheladooda iyo saaxibbadooda la noolaayeen. Qaar kale ayaa iskuulada, xafiisyada iyo kaniisadaha hooy ka dhiganayay. In kabadan 200 oo qoys ayaa hadda ku nool meel u dhow goobtii ay masiibada ka dhacday oo biyo ay hadda la fadhiyaan.
Dowladda ayaa hadda waxa magaalooyinka Juba iyo Hill Station waxa ay ka sameysay labo xero oo loogu talagalay dadka soo barakacay, waxaana gacan siinaya hay'adaha Qaramada Midoobey iyo hay'adaha kale ee aan dowliga ahayn. Shakhsiyaadka ay caddaato in ay yihiin dhibanayaal aan haysan meel kale oo ay ku noqdaan ayaa xeryahan la dejin doonaa. Guryo ayaa hadda laga dhisayaa deegaanka Six Mile oo ku yaalla meel ka baxsan magaalada Freetown. Waxaana la rajeynayaa in muddo lix bilood gudahood ah qoysaska ay dhibaatada ka soo gaartay masiibadaasi ku soo guuraan guryahan.
Inkastoo gargaarku uu soo gaaray guud ahaan dalka isla markaana ay ka faa'iideen dad badan, haddana dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in la iska illaaway oo aysan haysan cunno, dawo iyo hooy ku filan.
Tan iyo markii ay masiibadaasi dhacday, Kadi Kamara iyo gabadheeda Esme oo sanad jir ah ayaa waxa ay hooy ka dhiganayeen guri qabyo ah oo aan gogolna lahayn.
"Waxaan maqlay in ay halkan naga rari rabaan oo ay noo ka xeyn doonaan mid ka mid ah xeryaha ay dowladda furtay," ayay tiri Kadi, "balse ilaa hadda halkan baan ku sugannahay. waxaan u maleynayaan in ay na illaaween. ilaa shalay subax waxbo ma aanan cunin. dad badan ayaa hadda xanuunsan."
Markii wax laga weydiiyay in ay is-diiwaangelisay si ay gargaar uga hesho dowladda, hay'adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa aan dowliga ahayn ayaa waxa ay ku jawaabtay "Dhowr hay'adood ayaa dadka diiwaangelinaya. dadku mar kastaa waa la diiwaangelinayaa. dhowr jeer baan anigu is-diiwaangeliyay balse ma hubo in kuwaasi ahaayeen sax iyo in kale. In aad caawimaad hesho ayaa ah arrin aad u adag, tusaale ahaan dadka qaar saddex joodari ayay haystaan qaarna sida innaga oo kale waxbo ma haysanno.
Mid ka mid ah xeryaha ay dowladda dhawaan furtay oo ku yaalla Juba ayaa haweeney waxa ay ka cabsi qabtaa in halkaa laga saaro waayo ma aysan helin kaarka jaallaha ah ee dadka loo qeybiyay kaddib markii ay is-diiwaangeliyeen.
"Maalintaasi waxaan ka mid ahaa dad badan oo ku sugnaa gudaha iskuul halkaa ku yalla. waxaa noola sheegay in aan halkaa cunno gargaar ah u raadsanno. Kadiib markii aan xerada Kamayama ku soo laabannay ayaa waxaa noola sheegay in dadka la diiwaangeliyay intii aan maqnayn," ayay tiri haweeneydani.
Mariatu Bangura oo 12 jir ah ayaa soo uruursatay alaabteeda oo waxa ay sugeysaa in loo wareejiyo xero ku taalla Juba. Waxay taagan tahay halkii uu gurigeeda ku ooli jiray, waxayna deris la ahayd eedadeed. Maalintii ay masiibadu dhaceysay waxay ku maqnayd guriga ayaydeed balse waxaa masiibadaasi ku dhintay labadeeda waalid.
"Hadda waxaan mas'uul ka ahay toddobo carruur ah," ayay tiri eedadeed Mariah. "Waa arrin aad u adag, sababta oo ah waxaanba awoodi la'ahay in aan masaruuf u helo qoyskeyga. Waxaan ogahay dad been sheegaya oo leh waxaan nahay dadkii ay masiibadani haleeshay, kuwaasi oo is-diiwaangelinayo basle innagu waxaan nahay dhibaneyaashii rasmiga ahaa waxaana u baahannahay caawimaad".
Mariatu, meel kale lama geyn maalintaasi, waxayna guriga eedadeed ku laabatay isla maalintaasi gelinka dambe.
Esta iyo Ibraahim Kargbo ayaa ku wada nool deegaanka Kamayama, labadooduna waxay masiibadaasi ku waayeen waalidiintooda.
Esta waxay la nooleed qof ehelkeeda ah xilligii ay masiibadaasi dhaceysay basle Ibraahim waxa uu la joogay qoyskiisa. Waxaa ku soo dumay saqafka gurigooda waxaana markii dambe soo badbaadiyay qof deriskooda ah. Haatan, carruurtaasi waxay la nool yihiin adeerkood oo aan dhaqaale haysan, waxa uuna hadda la murugeysan yahay sidii uu carruurtani u korin lahaa. Iskuulada ayaa hadda la furay wuxuuna u baahan yahay in uu buugaag u iibiyo isla markaana uu u helo lacag ay qado ku iibsadaan.
"Inta badan dumarkani waxay masiibadaasi ku waayeen guryahooda, raggoodi iyo carruurtooda. Qaarkood lama diiwaangelin waayo horjoogeyaasha deegaankooda ayaa sheegay in aysan aqoonsan karin cidda ay yihiin. Arrintaa ayaa waxa ay ka dhigan tahay in aysan wax caawimaad ah heli doonin," ayuu yiri baadari lagu magacaabo John.
Mar wax laga weydiiyay xerada dadkan loo wareejin doone ee ku taalla deegaanka Six Mile ayaa waxa uu yiri: " Mar haddii ay iskuullo, kaniisado, masaajid iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ahi ay ku yaalliin, waxay ila tahay in dadku ay qanci doonaan".
Dhismo ayaa ka socda xerada ku taal deegaanka Six Mile.
Afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Cbdullahi Baytayray ayaa yiri: "Ugu horreyn waxaan dhisi doonaan 53 guri. Sidoo kale waxan dhisi doonaa xarun lagu xannaaneeyo agoonta, isbitaal iyo iskuul. Dhul ayaan u qoondeynay in dhammaan dhismoyaashani aan ka hirgelinno oo aan halkaa dejinno dhammaan dadkii ay waxyeelada soo gaartay iyo kuwa deggan meelaha halista ah ee ku yaalla magaalada Freetown".
Olivia Acland ayaa leh xuquuqda dhammaan sawirradani.